Sheekh Shariif: Xaaladda amniga dalka waa ay sii xumaanaysaa | KEYDMEDIA ENGLISH
Sheekh Shariif: Xaaladda amniga dalka waa ay sii xumaanaysaa
Sheekh Shariif ayaa ku baaqey in la dedejiyo doorashadda, taasoo ah xalka kaliya ee looga bixi karo jahwareerka siyaasadeed iyo xaaladda cakiran ee ka jirta.
MUQDISHO, Soomaaliya - Madaxweynihii 7aad ee Soomaaliya Sheekh Shariif, ayaa ka hadlay qaraxyadii Beledweyne iyo weerarkii tooska ahaa ee lagu qaadey saddex maalin kahor Garoonka diyaaradaha Aadan Cadde, ee magaaladda Muqdisho.
Muuqaal uu soo duubey ayuu uga hadlay Sheekh Shariif Xaaladda amniga ee dalka iyo doorashadda, isagoo eedeymo kulul u jeediyay hay'adaha dalka iyo mas'uuliyiinta dowladda Soomaaliya.
Xaaladda amniga dalka waa ay sii xumaanaysaa, waxaa muuqda dayac ay sameeyeen hey'adaha Amniga, waxaan aad uga xumahay weeraradii ka dhacay Muqdisho iyo Baladweyne,' ayuu yiri Sheekh Shariif.
Wuxuu cambaareeyay dilkii Xildhibaanad Amina Maxamed Cabdi, oo ku tilmaamay mid laga naxo, oo lagu beegsaday Hooyo Soomaaliye iyo qof xaqa iyo Cadaaladda dadka dulman u doodi jirtay.
Hay'adaha amniga ayaa kala qeybsan, waxayna gabeen mas'uuliyadooda, iyadoo la siyaasadeeyay amniga qaranka, oo kooxba si gaar ah u maamusho, taasoo fursad siiyay Al-Shabaab oo kordhisay weerarada Muqdisho iyo meelaha kale.
Sheekh Shariif ayaa sheegay in dhibaatada Soomaaliya ka jirta looga bixi karo kaliya in lasoo gabagabeeyo doorashadda, oo dalka uu yeesho dowlad cusub, oo sharciyad leh, taasoo qaada mas'uuliyadda amniga iyo la dagaalanka Al-Shabaab, oo Farmaajo ka gaabiyay.
Sheekh Shariif oo dalka Madaxweyne kasoo noqdey 2009-2012 ayaa lagu xasuustaa inuu Al-Shabaab ka saarey Caasimadda iyo degmooyinka ku dhaw, isagoo sidoo kale doorashaddii ugu horey ku qabtay gudaha dalka, gaar ahaan Muqdisho oo Xasan Sheekh lagu doortay, halka doorashooyinkii hore dibadda ka dhici jireen.
Comments Topics: sheekh shariif soomaaliya